China Florfenicol Oral Powder 10% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
I-Florfenicol Powder yomlomo 10%
Kuqukethe i-gram powder ngayinye:
I-Florfenicol: 100 mg.
Izikhangiso ezisizelwa: 1 g.
umthamo:Isisindo singenziwa ngezifiso
I-Florfenicol iyimithi elwa namagciwane ebanzi ebanzi esebenza ngempumelelo ngokumelene namagciwane amaningi we-Gram-positive ne-Gram-negative ahlukaniswe nezilwane ezifuywayo. I-Florfenicol, okuvela ku-chloramphenicol, esebenza ngokuvimbela amaprotheni synthesis ezingeni le-ribosomal futhi yi-bacteriostatic.
I-Florfenicol ayinayo ingozi yokunciphisa i-anl aplastic anemia ehlotshaniswa nokusetshenziswa kwe-chloramphenicol, futhi futhi inomsebenzi wokulwa nezinye izinhlobo zama-bacteria amelana ne-chloramphenicol.
Ukwelashwa kwesifo sokuphefumula sezingulube ezingulubeni ngazinye ngenxa yePasteurella multocida ethinteka ku-florfenicol.
Ungayisebenzisi ezingulubeni ezihloselwe ukuzalanisa.
Ungayisebenzisi ezimeni ze-hypersensitivity kuzinto ezisebenzayo noma kunoma iyiphi ye-excipients.
Izingulube: 10 mg we-florfenicol ngesisindo somzimba esingu-kg (bw) (okulingana no-100 mg umkhiqizo wezilwane wezilwane) ngosuku oxutshwe engxenyeni yesabelo sansuku zonke sokudla ngezinsuku ezi-5 zilandelana.
Izinkukhu: 10 mg we-florfenicol ngesisindo somzimba esingu-kg (bw) (okulingana no-100 mg umkhiqizo wezilwane wezilwane) ngosuku oxutshwe engxenyeni yesabelo sansuku zonke sokudla ngezinsuku ezi-5 zilandelana.
Ukwehla kokusetshenziswa kokudla namanzi nokuthamba kwesikhashana kwendle noma isifo sohudo kungenzeka ngesikhathi sokwelashwa. Izilwane eziphathwayo zilulama ngokushesha futhi ngokuphelele lapho kumiswa ukwelashwa. Ezingulubeni, imiphumela emibi evame ukubonwa uhudo, i-peri-anal kanye ne-erythema / i-edema eyi-rectal kanye nokuqhuma kwe-rectum. Le miphumela ingeyesikhashana.
Inyama ne-offal: izinsuku eziyi-14
Langaphambilini I-Doxycycline hydrochloride powder encibilikayo 50%
Olandelayo: Ivermectin premix 0.2%
I-Multivitamin Oral Powder
Amoxicillin encibilikayo Powder 10Amoxicillin Solubl ...
I-Oxytetramisole Hydrochloride Powder encibilikayo 10%
I-Diclazuril Premix 1%
I-Doxycycline hydrochloride powder encibilikayo 50%
I-Tilmicosin Phosphate Premix 20%
Tilmicosin Powder encibilikayo 10%